Qormada Kuleejka ee Soomaaliya
Qoraalkaaga Shakhsi ahaaneed adiga oo aan bixin lacag qarsoon. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Talooyin Ku Saabsan Qorista Qormada Kuliyadda
Qorista qoraalka maqaalka waa xirfad ay tahay in qorayaasha oo dhami ay bartaan si ay ugu sii gudbaan adduunka academe. Qorista qormada, sida xirfadaha kale oo kale, waa la baran karaa. Maqaalkan, waxaan ku siin doonaa macluumaad yar oo ku saabsan sida loo bilaabo safarkaaga noqoshada qoraa curis ah.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ka hor intaadan qorin qormada kulliyadda ayaa ah inaad waqti qaadato si aad uga fikirto waxa uu qormadaadu noqon doono. Haddii aad naftaada u qoraysid sheeko shaqsiyeed, markaa waxaad u baahan doontaa inaad doorato mowduuc adiga kugu habboon. Haddii aad wax u qorayso fasalka aad qaadanaysid, markaa waxaad u baahan doontaa inaad doorato mowduuc guud oo guud. Markaad dooratid mawduucaaga, markaa waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo inaad ka fikirto sida aad uqoro qoritaanka. Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo aad ugu dhawaan karto qoraalka qormada oo kuwan oo dhami way shaqeyn doonaan haddii aad rabto inaad noqoto qoraa curis ah.
Hal dariiqo oo ay tahay in qorayaasha qormada oo dhami ay bilaabaan waa iyagoo ku bilaaba cilmi baaris. Qoraa maqaal ahaan, waa inaad adeegsataa cilmi baaris si aad fikradahaaga ugu soo daadiso warqad. Tan macnaheedu waxa weeye waa inaad xoogaa qodis ah si aad wax uga ogaato waxyaabaha ku saabsan mawduuca aad dooratay inaad wax ka qorto. Waxaad ubaahantahay inaad raadiso waxkasta oo aad awoodid si aad u ogaato noocyada xaqiiqooyinka iyo macluumaadka ee halkaa yaala. Ka dib markaad samaysay cilmi-baaristaada, markaa waxaad u baahan doontaa inaad ku qorto hordhaca qoraalkaaga. Tani waxay badanaa noqon doontaa cutub kooban oo ku saabsan nooca xaqiiqooyinka iyo macluumaadka aad ka heshay baaritaankaaga.
Qaybta xigta ee sida loo qoro qormada kulliyadda waa jirka qoraalkaaga. Tani waxay ka koobnaan doontaa dhowr faqradood oo dhammaantood ka hadlaya mawduuca aad dooratay. Qormada oo dhan waa inay ahaato mid ku saabsan aragtidaada ku saabsan mawduuca, maxaad u aaminsan tahay inaad ku saxsan tahay, iyo sida cilmi baaristaadu u caddeyso inaad sax tahay. Hubso inaad cutubyadaan uguqorto si macquul ah si aad awoodi karto inaad uga gudubto hal cutub una gudubto kan kale si fudud. Sidoo kale, hubi inaad adeegsanayso naxwaha wanaagsan iyo higgaadinta markay u socoto qormadaada.
Tilmaam kale oo ah in la raaco marka la baranayo sida loo qoro maqaalka kuleejka ayaa ah in la hubiyo in weedhahaagu si wanaagsan loo qaabeeyey Qormooyinka kulleejyada badankood waa kuwo dhaadheer, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad waqti ku bixisid dhismaha baaragaraafyadaada, iyo adeegsiga naxwaha saxda ah. Si tan looga caawiyo, fiiri qormooyinka kulliyadda qaarkood ee aad aqrisay oo aad wax ka baratay, waxna ka barto qaab-dhismeedkooda.
Si loo barto sida loo qoro curiska kulleejada, waxaa kale oo muhiim ah inaad wax ka barato waxa ay qaybaha kala duwan u yihiin qormadaada. Qaybahani waa hordhac, jidh, iyo gabagabo. Qaybahani waxay kuu oggolaanayaan inaad soo bandhigto macluumaad iyo doodo ku saabsan mawduuca maqaalka kulliyaddaada. Xaaladaha badankood, waxaad ubaahantahay inaad kubilaabato hordhaca maxaa yeelay waa meesha aad naftaada ugubarto akhristaha. Waxaad markaa dhisi kartaa doodaada illaa dhamaadka qormada.
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee barashada sida loo qoro curiska kulliyadda, ayaa la diyaarinayaa. Uma baahnid inaad waqti ku lumiso inaad isku daydo inaad la timaad qormo la qoray oo la soo gudbiyey saacado ka hor uun. Sidoo kale ma doonaysid inaad ku soo gaadho dhamaadka qormada oo aad ogaato inaadan aqoon waxa dambe ee aad qorto. Sidaa darteed, waxaad dooneysaa inaad waqti badan kubixiso qorsheynta qormadaada oo aad dib ugulaabaneyso.
Tilmaamaha ugu dambeeya ee la raaco marka la baranayo sida loo qoro curiska kulleejadu waa inaad hubiso inaadan walwalsaneyn. Kuleejku waa wakhti buuq badan nolosha dadka badankood, waana inaad u diyaar garowdaa tan. U qor maqaalka kulleejada dugsiga, maxaa yeelay tani waa sida kaliya ee aad ku heli karto shahaadada kulliyadda ee aad dadaalka ugu jirtay. Sidoo kale, markaad qalin jabiso, waad ku farxi doontaa inaad adeegsatay qormo qormo si aad u fuliso hamigaaga waxbarashada kuleejka.